५ मिनेट चार्जमै १ घन्टा टिकटक चलाउन मिल्ने ओपो मोबाइल (भिडिओ) :: Setopati
५ मिनेट चार्जमै १ घन्टा टिकटक चलाउन मिल्ने ओपो मोबाइल (भिडिओ) नेपाली बजारमा कति पर्छ?
सुनिता सिटौला काठमाडौं, असोज १३
ओपो एफ १७ प्रो
ओपोले नेपाली बजारमा नयाँ फोन ल्याएको छ। 'ओपो एफ १७ प्रो' नामको उक्त फोनको बुकिङ पनि खुला भइसकेको छ। ओपो नेपालका पिआर म्यानेजर सुरज महर्जनका अनुसार यो फोन विशेषगरी युवाहरूलाई लक्षित छ।
यो फोनको मुख्य विशेषता भनेको यसमा भएका ६ वटा क्यामरा हुन्। जसमा पछाडि चार वटा र अगाडि दुइटा सेल्फी क्यामरा छन्। यी क्यामराले पोट्रेट फोटो खिच्न सहज बनाउँछ। यो भनेको कुनै पनि व्यक्तिको अनुहार वा वस्तुलाई नजिकबाट प्रस्ट देखिनेगरी खिच्न सकिने सुविधा हो।
अर्को मुख्य विशेषता भनेको यसको चार्जिङ सुविधा हो। सुरजका अनुसार ओपोको नयाँ फोन तीस मिनेटमा ७४ प्रतिशत चार्ज हुन्छ। जबकि यसअघिका ओपो फोन आधा घन्टा चार्ज गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै चार्ज हुन्थे।
'ओपो एफ १७ प्रो' ले ५ मिनेट मात्र चार्ज गर्दा पनि धेरै सुविधा दिने सुरज बताउँछन्। पहिलेका मोडलमा ५ मिनेट फोन चार्ज २ घन्टा टकटाइम पाइन्थ्यो। यो भनेको २ घन्टासम्म फोनमा बोल्न सकिने सुविधा हो।
'ओपो एफ १७ प्रो’ मा भने जम्मा ५ मिनेटकै चार्जमा ४ घन्टा टकटाइम पाइन्छ। यति मात्र होइन, इन्स्टाग्राम २ घन्टासम्म चलाउन सकिन्छ। पब्जी खेल्न परे एक घन्टासम्म खेल्न सकिन्छ। त्यस्तै टिकटक पनि एक घन्टासम्म चलाउन सकिन्छ।
हतारमा भएका बेला यो फोन थोरै समय चार्ज गरे पनि धेरै काम गर्न सकिने सुरज बताउँछन्।
यो फोनका अरू विशेषता के कस्ता छन्, हेर्नुस्ः
यो मोडलको मुख्य आकर्षण नै क्यामरा हो। यसमा ६ वटा एआई पोट्रेट क्यामरा राखिएका छन्। अगाडि १६ र २ मेगापिक्सलका दुइटा र पछाडि ४८ मेगापिक्सल वाइड, ८ मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, २ मेगापिक्सल डेप्थ र २ मेगापिक्सल म्याक्रो गरी चार वटा क्यामरा छन्।
यसबाट आफूलाई चाहिएको गुणस्तरमा फोटा खिच्न सकिन्छ। साथै विभिन्न फिल्टर प्रयोग गरेर फोटो राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ।
सुरजका अनुसार यी क्यामराबाट फोटा खिच्दा कपाल समेत स्पस्ट देखाउँछ। त्यस्तै झुम्का, आँखीभौं लगायत अनुहारका स-साना चारित्रिक विशेषता स्पष्ट रुपमा देखिनेछ।
अनि पृष्ठभूमि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट बनाएर आफ्नो फोटो मात्र जस्ताको तस्तै रंगीन निकाल्न पनि सकिन्छ। कम प्रकाश भएको अवस्थामा पनि चहकिला र स्पष्ट फोटो लिन सकिनेछ। साथै राम्रो भिडिओ खिच्न पनि यी क्यामरा उपयुक्त छन्।
हामी कहिलेकाहीँ फोनमा दाग बसेर हैरान हुन्छौं। टालाटुली वा टिस्यु खोजेर पुछिरहेका पनि हुन्छौं। यो फोनमा भने यस्तो झमेला पर्दैन।
सुरजका अनुसार यसमा हातले छुँदा दाग बस्दैन। यसका लागि फोनमा म्याट डिजाइन प्रयोग गरिएको छ। ६.४३ इञ्चको डिस्प्ले भएको 'ओपो एफ १७ प्रो' अरू मोडलभन्दा पातलो भएकाले खल्ती वा हाते पर्समा सजिलै अटाउँछ।
चम्किलो तर फिक्का रङ प्रयोग भएको यो फोन म्याजिक ब्लु र म्याट ब्ल्याक गरी दुई रङमा उपलब्ध छ।
ओपोमो चाँडो चार्ज हुने प्रविधि भुक ४.० छ। जम्मा ५३ मिनेटमा फोन पूरा चार्ज हुन्छ। यो चार्जिङ प्रविधि तीव्र हुनुका साथै सुरक्षित पनि भएको सुरज बताउँछन्। फोन चार्ज गर्दा तात्ने समस्या हुँदैन।
अनि यसमा रहेको सुपर पावर सेभिङ मोडले अन्तिम ५ प्रतिशत ब्याट्री हुँदा स्क्रिनलाई ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट बनाइदिन्छ। सोही समयमा आपतकालीन ६ वटा एप्स पनि चलाउन पनि सकिन्छ। यसमा फोन कन्ट्याक्ट, म्याप, म्यासेजजस्ता आफूलाई चाहिने एप्स मिलाएर राख्न सकिन्छ।
तीव्र र सहज प्रयोग
यो फोनमा ८ जिबी र्‍याम र १२८ जिबी स्टोरेज क्षमता छ। त्यस्तै तीन वटा मेमोरी कार्ड हाल्न मिल्ने भएकाले ५१२ जिबीसम्म बढाउन सकिन्छ। यति धेरै क्षमता भएपछि फोनमा धेरै कुरा अटाउन सकिन्छ र ह्याङ हुने सम्भावना पनि कमै हुन्छ।
यो फोनमा कम्पनीले एयर गेस्चर भन्ने सुविधा राखेको छ। अर्थात् फोन नछोइकनै २० देखि ५० सेन्टिमिटरसम्मको दुरीमा हातको इशाराले कल उठाउन सकिन्छ। विशेषगरी, हात भिजेको वा फोहोर भएको अवस्थामा यो फिचर निकै उपयोगी हुने सुरजको भनाइ छ।
कहिलेदेखि किन्न पाइन्छ?
नेपाली बजारमा 'ओपो एफ १७ प्रो' यही अक्टोबर १ तारिकदेखि उपलब्ध हुनेछ। ग्राहकले नजिकका मोबाइल पसलमा गएर अहिल्यै बुकिङ गर्न सक्नेछन्।
सुरजका अनुसार बुकिङ गर्ने ग्राहकलाई फोन किन्दा ब्लुटुथ स्पिकर उपहार दिइनेछ।
'ओपो एफ १७ प्रो' को बजार मूल्य ४३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तोकिएको छ।